Boeny: Fangatahana ny hampiharana avy hatrany ny didy 2015-014 momban’ny fiarovana ny zon’ny mpanjifa | Région Boeny
Boeny: Fangatahana ny hampiharana avy hatrany ny didy 2015-014 momban’ny fiarovana ny zon’ny mpanjifa
17 mars 2016 A La Une, Actualité
Nankalaza ny andro maneran-tany ho an’ny Zon’ny mpanjifa ny teto Mahajanga ny Talata 15 martsa 2016 tao amin’ny Tranoben’ny Kolotsaina.
Natao izany mba hisian’ny fiaraha-miasa eo amin’ny fanjakana sy ny mpanjifa amin’ny tokony hampiharana amin’izay ny lalàna 2015–014 momba ny fiarovana ny Zon’ny mpanjifa ary mba hametrahana ny politika mazava mikasika ny fanjifana.
Filaharana mamakivaky ny tanàna izay nataon’ny fikambanam- behivavy maromaro, nitondra sora-baventy niainga teny amin’ny zaridaina Cayla Mahabibo, ary nifarana tao amin’ny Tranoben’ny Kolotsaina, no nanokafana ny fankalazana.
Ry mpanjifa hajaina, fantaro ny zonao sy ny adidinao. Io no lohahevitra nentina nandritra izany.
Tonga nanotrona ny lanonana ny solombavam-bahoaka voafidy teto Mahajanga voalohany, Atoa Nicolas Stéphan, ny Préfet an’I Mahajanga, ary ny Lehiben’ny Faritra Boeny, Atoa Saïd Ahamad Jaffar “izay nanatitrantitra fa tsy afaka misaraka amin’ny mpanjifa izahay ary miara-miasa satria mpanjifa isika mianakavy”.
Teny an-toerana ihany koa Ben’ny tanànan’i Mahajanga sy ny Talem-paritry ny Varotra sy ny Fanjifana ary ny Talem-paritry Indostria eto Boeny ary ireo manam-boninahitra sivily sy miaramila.
Nohararaotin’ny ny solombavam-bahoaka io fotoana io nampahatsiahivana fa hovahaina atsy ho atsy ny olana mikasika ny ady tany ao Belinta, Amborovy, distrikan’I Mahajanga I.
Ny tolak’andro, nisy ny fivoriana sy fifanakalozan-kevitra izay niarahan’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany sy ny fandrefesan-tany ary ny fikambanan’ny zon’ny mpanjifa eto Mahajanga tao amin’ny Tranoben’ny Kolotsaina ihany.